तिर्खा : प्रिय पुरुष
कृष्णपक्षको कथासंग्रह (Tirkha is an anthology of Nepali Short stories based on Israel by Krishna Thapa.)
तिर्खा कथा संग्रहको पृष्ठ २१ बाट शुरु हुन्छ प्रेमाको पत्र .. जसमा लेखिएको छ
आज एउटी नारी यो लेखिरहेकी छ , अचम्मित भयौ होला । नहुनु पनि किन ? पुरुष मानसिकताले जरो गाडेको समाजको मान्छे हौ तिमी, स्वाभाविक छ । सैयौं बर्ष देखि नारीमाथि शोषण, अत्याचार भएका छन ।
तिम्रो पुरुषप्रधान समाजले अनेक नीति नियम खडा गरेर हामीलाई र हाम्रो रहरलाई संस्कारको जाँतोमा पिधेका छौं । हाम्रो यौवन र शरीरलाई थुनेका छौ, पिंजडामा कैद गरेका छौ । केवल उपभोग्य सामान जस्तै हाम्रा अनमोल यौवनहरु किनेका छौ, बेचेका छौ । तर यो सिलसिलाको अन्त्य अवश्यम्भावी छ, क्रमभंग निश्चित छ, किनकी समय परीवर्तनशील छ ।
समयको कुनै मोडमा पुगेर कुनै युवतीको खेलौना भएछु भन्ने लाग्यो भने मलाइ माफ गर । म त्यसरी सोच्दिन, हाम्रो सम्बन्धलाई मैले अहिले पनि प्रेम नै मानेकी छु । तिमी मान या नमान आकर्षण र वासना प्रेमकै स्वरुपहरु हुन्, जसमा कुनै मिसावट थिएन, वाचा बन्धन र सम्झौता थिएन । कुनै गुनासो थिएन, भोलीको प्रतीक्षा पनि थिएन । त्यो शरीरको नितान्त प्राकृतिक तिर्खा थियो, मेटियो र सकियो । म यही सिद्धान्तमा हिडिरहेकी छु ।
म शरीरलाइ प्रेम गर्छु, मलाइ आत्माको बन्धनमा कुनै विश्वास पनि छैन ।आशा छ तिमी पनि म फर्केर आउने बाटो कुर्ने छैनौ ।
प्रिय पुरुष,... त्यो शरीरको नितान्त प्राकृतिक तिर्खा थियो, मेटियो र सकियो । म यही सिध्दान्तमा हिडिरहेकि छु ।म शरीरला...
भिडियो प्रोमोमा दिनु भएको यो मिठो आवाजका लागि साहित्यकार लक्ष्मी अनुरागी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । साहित्यकार लक्ष्मी अनुरागीका सांगीतिक एल्वम 'किनारा' तथा गीत तथा गज़ल सङ्ग्रह 'समय संवेग' प्रकाशित छन ।
अनलाइन किन्नुहोस - पुस्तक तपाईंको घरमै ।
(यो सुबिधा हाल इजरायलका पाठकहरुका लागि मात्र)
तिर्खा कथा सङ्ग्रह
यो हप्ता सर्वाधिक पढिएको
यौन आदर्शको कथा - राम गोपाल आशुतोष (नयाँ पत्रिका )
राम गोपाल आशुतोष एकान्त होस् । पृष्ठभूमिमा बजिरहेको होस् स्वरसम्राट नारायणगोपाल गुर्बाचार्यका कालजयी आवाज – पर्खी बसेँ आउला भनी मेरो ...
'तिर्खा'सँग जोडिएका केही हार्दिकताका तस्वीरहरु ...
यी तस्वीरहरु मेरा साथी र पाठकहरुले इन्टरनेटमा पोष्ट गरेका, फेसबुकमा सेल्फी खिचेका वा मेसेज गरेका तस्वीरहरु संकलन गरेर राखेको हुँ .. यहाँ हुनु भएका र नहुनु भएका सबैमा हार्दिक आभार
यहाँ केही रंगहरु छन प्रेमका ...
केही अनुभूतिहरु छन 'तिर्खा'का...
मेरो कथा संग्रहप्रति तपाईंका भावनाहरु, अभिव्यक्तिहरु या तपाइंले देखाउनु भएको प्रेम, सद्भाव र तिर्खा संग्रह पढेर वा पढ्ने अभिप्रायका साथ् व्यक्त गर्नु भएका उद्गारहरु छन यहाँ ।
'तिर्खा' लिएर खिचिएका सेल्फीहरु हुन् या गाली र तालीका ससाना स्टाटसहरु ... या तपाईंले मेहनत गरेर लेख्नु भएको कृति समीक्षा .. ती सबै मलाई अमुल्य उपहार जस्तै लागेका छन । सोचें - यो उपहारलाई इन्टरनेटको एउटा पानामा सधैंका लागि राखूँ र बेला-बेला प्रेमले पल्टाउँ मिठो सम्झनाजस्तै ...
यो बतासमा भेटुँ
यसले बोकेर ल्याएको सुवासमा भेटुँ
र फूलमा, सुगन्धमा गुलाबमा भेटुँ
ए पात्रा !
कथामा भेटुँ तिमीलाई किताबमा भेटुँ...
म कृष्णपक्ष, हाल इजरायलमा छु । मेरो कथासंग्रह 'तिर्खा' बजारमा आएको छ, जहाँ मैले म र मजस्तै आम मानिसका विविध घटना, भोगाई र अनुभूतिहरुलाई छोटा छोटा कथाहरुको आकार दिएर प्रस्तुत गरेको छु । यो ब्लग तिर्खा कथासङ्ग्रहका पाठकहरुका लागि हो । यहाँ तिर्खासँग सम्बन्धित फोटो, प्रतिक्रिया समीक्षा या पाठकहरुबाट सामाजिक संजालमा पोष्ट भएका केही सामाग्री समेटिएका छन ।
--तिर्खा कथा संग्रहको फेसबुक
ईमेल - hi@krishnathapa.com